Fahasimban’ny sekoly : Tsy hisy fiantraikany amin’ny fanadinam-panjakana -
AccueilSongandinaFahasimban’ny sekoly : Tsy hisy fiantraikany amin’ny fanadinam-panjakana
Fahasimban’ny sekoly : Tsy hisy fiantraikany amin’ny fanadinam-panjakana
21/03/2018 admintriatra Songandina 0
Sekoly 21 any amin’ny faritra Sava sy Diana no simba tanteraka sy simba amin’ny ampahany vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim, araka ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Manodidina ny 6 indray ireo simba tanteraka any amin’ny faritra Alaotra Mangoro, raha miisa 2 ireo simba amin’ny ampahany, ary toraka izany koa ny any amin’ny faritra Analamanga. Miisa 3 kosa ireo sekoly simba tanteraka sy amin’ny ampahany tany amin’ny faritra Atsinanana. Tany amin’ny faritra Analanjirofo kosa no tena nahitana sekoly betsaka simba indrindra taorian’ny fandalovan’i Eliakim, izay miisa 38 ireo simba tanteraka, raha toa ka 51 isa ireo simba amin’ny ampahany. Voatery any amin’ny birao fokontany, birao kaominina, fiangonana no manova fianarana ireo mpianatra mba tsy ho tapaka lava be ny fianarana. Efa mandray fepetra amin’ny fanamboarana kosa ankehitriny ny eo anivon’ny minisitera. Fa na izany aza, dia tsy hisy fiantraikany amin’ny fianaran’ny mpianatra ny voka-dratsin’ny rivodoza Eliakim.
“Raha ny antontan’isa azo amin’izao dia Cisco miisa 5 no tena hita fa voa mafy tamin’iny fandalovan’iny rivodoza iny. Misy sekoly 10 dia Dren telo no hita fa nandalovany, ka ny Dren Atsinanana, Analanjirofo, Alaotra Mangoro. Misy voakitika koa iny Avaratra iny fa na izany aza tsy dia nandrava be ny rivodoza Eliakim raha noharina tamin’ireo teo aloha. Fa nisy ny sekoly rava na tamin’ny ampahany izany, na rava tanteraka fa efa mandray ny andraikitra ny minisitera”, hoy i Andriamampandry Todisoa, tale jeneralin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Mpitondra tenin’ny governemanta : Iniana haratsiana ny lalàm-pifidianana